Maamulka Dugsiyada Nooradiin Oo Qoral Kaga Jawaabay Dhacdadii Maanta | Salaan Media
Maamulka Dugsiyada Nooradiin Oo Qoral Kaga Jawaabay Dhacdadii Maanta
October 6, 2021 | Published by: Hamse
Xaqiiqo ku saabsan dhacdadii koobnayd ee ka dhacday maanta Dugsiga Sare ee Hablaha ee Noradin
Waxa maanta oo ah maalin Arbaca ah taariikhduna ay tahay 06/10/2021, Dugsiga sare ee Hablaha ee Noradin fasal gudihii isku laayay laba hablood oo ka mid ah ardayda Dugsiga dhigata. Labada hablood ee islaayay mid ka mid ah ayaa waxa ay soo qaatay (Defence Spray) magaceeda layidhaahdo (PFEFFER KO JET). Haddii aan sharax kooban ka bixiyo Spray gan, waxa loo isticmaalaa aduunka difaaca shakhsiga ah sida marka uu qofku iska difaacayo tuug soo weerartay iyo wixii dhibaataynaaya, waxyaabaha ay ka samaysan tahay waxa ka mid ah BASBAAS DABIICI AH oo dadka ka ilmaysiiya, qufac iyo hindhisona keena.
Labadii hablood markii ay dagaalameen isna gaadhsiiyeen xagtimo wajiga ah ka dib ayay mid ka mid ah lasoo baxday Spray ga la buufiyo oo aan kor ku soo sharaxnay, kuna buufisay fasalka dhexdiisii iyadoo ula jeeday ardayada ay is laayeen in ay ku buufiso, ka dib waxa ay u dhiibtay Spray gii ardayad kale, ardayadii kale ayaa mar labaad Spray- gii buufisay, waxa uu saameeyay ardaydii fasalka ku jirtay, iyadoo islamarkaas arday kooban oo fasalka ah ay ku sababtay in ay neef qabatoobaan.
Markii ay xaaladaasi dhacday waxa maamulka iyo macalimiintu waxa ay ku dadaaleen in ay maareeyaan xaalada ardayda lasoo gudboonaatay. Waxaan la xidhiidhnay waalidiintii ardaydaas neef qabatoobay si ay noogu yimaadaan, qaar ka mid ah ardaydiina waxaanu u qaadnay dhaktarka wayn si degdeg loogu daweeyo. Sidoo kale waxaanu la xidhiidhnay taliyaha saldhiga booliska ee Ibraahim Kood buur, taliyaha iyo xaajiyad boolis ah oo uu wato ayaa deg-deg noosoo gaadhay, halkaas oo ay kula wareegeen labadii hablood ee dagaalamay iyo ardayadii lagu qabtay Spray gii la buufiyay. Waxa xusid mudan in aan habsami u socodkii waxbarsho ee dugsiga aan wax hakad ahi ku iman oo ay sidoodii usii socdeen.
Waxaa sidoo kale dhakhtarka ku booqday ardaydii dhibtu gaadhay Wasiirka Wasaarada Waxbarashada iyo xubno agaasimayaal ah oo ka tirsan wasaarada.
Waxa gacanta ku haya kiiskii laanta amniga ee booliska oo samayn doonaa baadhitaan buuxa oo ku saabsan sida ay wax u dheceen. Waxa aan ilaahay uga mahad celinaynaa In ay wayeeladu koobantahay, ardaydii ay dhibta soo gaadhay intooda badan ay aad u fiican yihiin marka laga reebo laba arday oo dhaktarka ku jira oo iyagana xaaladoodu fiicantahay.
Haddaba war ka la qoray ee sheegaya in ay macalimiinta iyo maamulku sun ku buufiyeen ay ku kala kaxaynayaan waa war aan sal iyo raad toona lahayn ahna been abuur cad. Waxa aanu waalidiinta, ardayda iyo dhamaan bahda waxbarashada u sheegaynaa in dhacdadu ahayn arintaas fudud ee aan kor kagasoo waranay.
Waxa ay nu ogsoonahay in laba arday oo dugsi ku dagaalamaa ay tahay arin caam ah oo marwalba ka dhacda dugsiyada xalkeeduna fududyahay oo aanay u qalmin wax la buunbuuniyo oo laga dhex raadiyo arimo aan munaasib ahayn.
Xafiiska Maamulka Dugsiga Sare ee Hablaha ee Noradin